YEYINTNGE(CANADA): Sunday, May 05
localတွေပြန်ခွဲရမယ်..local 102 စသဖြင့်...
ကနေဒါရဲ့အကြီးဆုံးUnion UFCW ဟာ
အလုပ်ရုံတွေမှာsteward ရယ် Chief steward ရယ်
union Representative ရယ်လို့ထားရှိတယ်။အလုပ်
မူတည်ပြီးsteward ရယ် Chief steward တွေကိုထပ်
union Representative ဟာအနည်းဆုံးရုံးချူပ်ကပို့ချတဲ့
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/05/20130အကြံပြုခြင်း
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများစု နေထိုင်သည့် မြို့များ၌ စီမံချက်ဖြင့် စုံစမ်း စစ်ဆေးလျက်ရှိ
Created on Sunday, 05 May 2013 02:02
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်နှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို နှိမ်နှင်းရန်အတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ လေ့ကျင့်နေမှုကို မတ်လအတွင်းက တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ - ၀င်းမြင့်ကျော်)
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဒုတိယတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ထွန်းနိုင်က "မြန်မာနိုင်ငံကို ဂျီဟတ်ဆင်နွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောကြားလိုက်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့ တိုင်းအတွင်းမှာ ယခင်ကထက် လုံခြုံရေးကို ပိုမိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ မြို့အ၀င် အထွက်တွေမှာလဲ ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်။ မြို့တွင်းမှာလည်း ရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်။ တိုင်းတစ်ခုလုံး အနေနဲ့ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ရဲအင်အားက တစ်ရက်ကို ပျှမ်းမျှဦးရေ ၆၀၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်။ ဆူပူမှုတွေ အကြမ်းဖက်မှုတွေ ပေါက်ကွဲမှုတွေ အကယ်၍ ဖြစ်ပွားလာပြီဆိုရင် ဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကို အမြန်ဆုံး ရောက်ရှိဖို့ အမြန်ဆုံး စစ်ဆေးဖမ်းဆီး အရေးယူဖို့အတွက် အဖွဲ့တွေကို ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်တယ်။ ဗုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ လိုအပ်တဲ့ အထောက်အကူ ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့လည်း လုံခြုံရေးသတိ အမြဲတမ်းရှိစေဖို့အတွက် ပညာရေး ဟောပြောပွဲတွေမှာ ထည့်သွင်းပြောကြားနေပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဂျီဟတ်စစ်ပွဲ ဆင်နွှဲရန် ဘာလီဗုံးဖောက်ခွဲမှု အကြမ်းဖက်ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာဘာရှာ၏ တိုက်တွန်းခဲ့မှုကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များ အများစု နေထိုင်သည့် မြို့များတွင် တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးများ၏ အစီအမံဖြင့် စီမံချက် ချမှတ်ကာ စုံစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ်ရှိ ရထားရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ တပ်ဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ရဲမှူးကြီး လှမိုးက ပြောပြခဲ့သည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းယုရှိန်က "ကျွန်တော်တို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးက အဖြူရောင်နယ်မြေလို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက် အကြမ်းဖက်မှုတွေ လုံးဝမဖြစ်ပွားအောင်လို့တော့ အစစအရာရာ ကြိုပြီးတော့ စီမံထားတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် အမာခံ သတင်းပေးတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ လုံခြုံရေးကို ဆောင်ရွက်နေတယ်။ နေ့စဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ တပ်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုလုံးမှာ မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့ လှည့်လည်ပြီးတော့ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဌာနချုပ် လုံခြုံရေးဌာနမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး မင်းအောင်က "ပြည်တွင်းကို အကြမ်းဖက်သမားတွေက ၀င်ရောက်ပြီးတော့ ဖောက်ခွဲဖျက်စီးမှု ပြုလုပ်မယ်လို့ သတင်းရရှိထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် လုံခြုံရေးကို အရင်ကထက် ကြပ်မတ်ဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်။ သူတို့တွေက အခွင့်အရေးရတဲ့ အချိန်ကို စောင့်ပြီးတော့ ဖျက်စီးမှုတွေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် အမြဲတမ်း သတိရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အခု နယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေမှာ လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်ထားပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ရဲမှုးကြီးမြ၀င်းက "အခုလို ပြောဆိုနေတာတွေကို သတင်းရရှိပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် မြို့ဝင်မြို့ထွက်တွေမှာ စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်နေတယ်။ အဓိကတော့ လူစိမ်းတွေ ၀င်တာနဲ့ သတင်းရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ထားတယ်။ ဟိုတယ်တွေ၊ တည်းခိုးခန်းတွေကိုလည်း စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်။ သတင်းကို အမြန်ဆုံး ရရှိဖို့အတွက် ဖြန့်ကြက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းတွေကို လက်ဦးရရှိဖို့အတွက် အလွှာအသီးသီးကိုလည်း လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်ဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်" ဟု သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ၏ ဗီဇာများကိုလည်း စနစ်တကျ စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ၀န်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျွန်တော်တို့ဌာန အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေရဲ့ဗီဇာတွေကို နိုင်ငံတကာစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းတွေနဲ့အညီ စနစ်တကျ စစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်နေတယ်။ Black List စာရင်းဝင်တဲ့ သူတွေကိုတော့ အဓိကထားပြီး စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေပါတယ်" ဟု လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာနမှ ရုံးအဖွဲ့မှူးဖြစ်သူ ဦးသန်းနိုင်ထွန်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/05/20132အကြံပြုခြင်း
လူထုမောင်ကာဠု စစ်အောင်၊ ဆိတ်ဖွား စတဲ့သူတွေရဲ့ ရေးဟန်တူညီနေ
ဒီနေ့အချိန်မှာလည်း တရား မျှတမှုနဲ့ အမှန်တရားကို ဖော်ထုတ်ရမယ့် ကိစ္စရပ်တွေ ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်(သို့မဟုတ်) လူတစ်စုတစ်ဖွဲ့က လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွေးချောင်းစီးစေမယ့် အခြေအနေကို တွန်းပို့နေပါတယ်။ ဒီလူတွေမှာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းလိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ပြည့်နှက်နေပြီး သူတို့ရဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေက ယခင်စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်ယန္တရား လည်ပတ်ခဲ့စဉ်က ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ တူညီနေပါတယ်။
အရေးယူမယ့်သူမရှိ လက်ရဲ ဇက်ရဲနိုင်တဲ့ သူတွေရဲ့ အနေအထားက ''ခေတ်သစ် ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေပြီ''ဆိုတဲ့ အနေအထားပါပဲ။
ဆက်သွယ်ရေး မြန်ဆန်လာမှု၊ အင်တာနက်ကို အသုံးပြုပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းလိုသူတွေရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ပုံစံတွေဟာ ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေမှာ အင်အား အလုံးအရင်းနဲ့ ၀င်ရောက်နေရာယူပြီး လိုချင်တဲ့ ပစ်မှတ်ကို ရအောင်ဖန်တီး လုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်တာကာလက စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ ဒီလူတွေ ခြေလှမ်းဟာ အခုချိန်မှာ အတော်လေး ခရီးပေါက်နေခဲ့ပါပြီ။ ဒီလူတွေဟာ အစိုးရရဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး ယန္တရားကတစ်ဆင့် လူထုကြားကို ကျယ်ပြန့်စွာနဲ့ ၀င်ရောက်နေရာယူပြီး သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ရေးသားချက်ကို ဖော်ထုတ်ရေးအတွက် လွှတ်တော်က ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က ခေါ်ယူမေးမြန်းခံရတဲ့ လူတွေထဲမှာ ကျွန်တော်လည်း ပါပါတယ်။ နေပြည်တော်မှာ သွားရောက် စစ်ဆေးခံခဲ့ပါတယ်။ ရက်ရှည်လများ အချိန်ယူ စုဆောင်းပြီး ကျွန်တော် သိရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချိန်တည်းက ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဟာ တစ်ဦးထက်မက ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပြောဆိုခဲ့ပြီးသားပါ။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အဖွဲ့တစ်ခု ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ရှိနိုင်တဲ့ အချက်တွေကိုလည်း ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနဲ့ လူထုမောင်ကာဠုလိုလူတွေ၊ သူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုဖော်ထုတ်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် မတိုင်မီ အချိန်မှာပဲ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေကြောင့် သွေးချောင်းစီးမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင် . . .
အံ့သြစရာ ကောင်းတာက ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ဒါမှမဟုတ် ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားအဖွဲ့ ဦးဆောင်သူကို စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တွေက သိနေတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဆိတ်ဖွားဟာ ဘယ်သူ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆိတ်ဖွားနဲ့ ဌာနတစ်ခုတည်း အလုပ်တွဲလုပ်ခဲ့တဲ့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးက ဒါကို ထောက်ခံပြီး ဟုတ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားသုံးတဲ့ IP လိပ်စာကို အဲဒီအချိန်ကတည်းက လွှတ်တော်က ရရှိထားပြီး ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒီအချက်တွေကြောင့် ''ဆိတ်ဖွားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီ'' လို့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်တွေ ပြောတာကို ကျွန်တော်က အံ့သြခြင်း မရှိပါဘူး။ သေချာတာကတော့ ဆိတ်ဖွားကို ဖော်ထုတ်ခြင်းဟာ လူတစ်ဦးရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်ကို ထိပါးတာ မဟုတ်ဘဲ သူ့နောက်မှာရှိနေတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို ဖွင့်ထုတ်လိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးတဲ့လူတွေဟာ ကိုယ်ရဲ့ စာရေးဟန်ကို အလုံးစုံ မပြောင်းလဲ နိုင်ကြပါဘူး။ ဘယ်လိုနာမည်တွေ သုံးပြီး ရေးသည် ဖြစ်စေ ကာလ ကြာလာတာနဲ့အမျှ မူလရေးဟန်ကို သွေဖယ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ စာရေးတဲ့တိုင်း သိကြပါတယ် လူထုမောင်ကာဠုကို စောင့်ကြည့် လေ့လာမှုတွေအရ သူရဲ့ရေးဟန်တွေဟာ စစ်အောင်၊ ဆိတ်ဖွား စတဲ့သူတွေရဲ့ ရေးဟန်နဲ့ တဖြည်းဖြည်း တူလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဆိတ်ဖွားနဲ့ လူထုမောင်ကာဠုဟာ စစ်တပ်နဲ့ သူတို့လူ တစ်ချို့ကိုသာ ချီးမြှောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ လမ်းသွားမယ့် သူတွေကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
အာဏာရှင်စနစ်ကို ပြန်လည် အသက်သွင်းလိုသူ ၀ါဒဖြန့်ချိရေး သမားတွေရဲ့ လုပ်နည်း လုပ်ဟန်က လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာတွေမှာ သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ အင်အားကောင်းလာအောင် ပထမဆုံး လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ သူတို့ရေးသားမှုတွေအောက်မှာ ဘယ်သူမဆို ၀င်ရောက် မှတ်ချက် ပေးနိုင်အောင် လုပ်ပါတယ်။ တတိယဆင့်မှာတော့ သူတို့ရေးသားမှုကို သူတို့ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တွေ ၀င်ရောက် မှတ်ချက်ရေးစေပြီး ထောက်ခံမှု ရေးသားစေပါတယ်။ ဒီနောက်မှာ တစ်ဆင့် ဖြန့်ဖြူးကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနည်းနဲ့သူတို့ရဲ့ ၀ါဒ ဖြန့်ချိ သွေးထိုးမှုတွေကို ကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ တရားရုံးတွေ အနေနဲ့ Facebook အသုံးပြုသူရဲ့ IP၊ မေးလ်လိပ်စာတွေကို တောင်းဖို့ ၀န်လေးနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူထုမောင်ကာဠုသိဖို့ လိုပါတယ်...
ရခိုင်ပဋိပက္ခ မကျယ်ပြန့်ခင် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ''မွတ်စလင်ကုလား'' ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှင်းလင်းမှုတွေ မရှိသေးပါဘူး။ အစိုးရသတင်းစဉ် အနေနဲ့ ''မွတ်စလင်ကုလား'' ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို အထက်လူကြီးရဲ့ အမိန့်မရဘဲ ထည့်ခွင့် မရှိဘူးဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်သူက အမိန့်ပေး စေခိုင်းသလဲ ဆိုတာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာလည်း မရှိသေးပါဘူး။
ပရော်ဖက်ဆာ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားဆိုတာ ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာနရဲ့ အဆင့်မြင့် အရာရှိပဲ ဖြစ်တယ်လို့ သူနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဖြစ်ခဲ့ဖူးသူ လွှတ်တော်အမတ်က စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်မှာ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာ၊ သာမန်လူတွေ မရနိုင်တဲ့ သတင်းတွေကို လူထုမောင်ကာဠု စာမျက်မှာ အချိန်နဲ့ တစ်ပြေးညီတင်ပြီး လှုံ့ဆော်မှု ပြုနိုင်တာတွေက သံသယ ဖြစ်စရာတွေပါ။ သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကို လုပ်ဆောင်နေသူတွေ သုံးတဲ့ ကလောင်နာမည်တွေကလည်း စစ်အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ ကလောင်အမည် ပေးပုံတွေနဲ့ ဆင်တူနေပါတယ်။
အခုချိန်မှာတော့ ဆိတ်ဖွားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပြီလို့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က ပြောထားပါတယ်။ ဆိတ်ဖွားဆိုသူနဲ့ သူ့နောက်မှာ ရှိနေသူတွေကို လွှတ်တော်က အရေးယူမလား။ အစိုးရက အရေးယူမလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဆိတ်ဖွားနဲ့ စပ်ဆက်ပြီး ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လူထုမောင်ကာဠုနဲ့ သူ့နောက်မှာ ရှိနေသူတွေကိုလည်း ဖော်ထုတ်အရေးယူဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။ ဒီလို ဖော်ထုတ်အရေးယူမှလည်း ပြည်သူတွေအတွက် အမှန်တရားနဲ့ မတရားမှုတွေကို ခံစားခဲ့ရတဲ့ မြန်မာ မွတ်စလင်တွေအတွက် မျှတမှုပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
အကယ်၍ လွှတ်တော်က အရေးမယူခဲ့ဘူး။ အစိုးရက အရေးမယူခဲ့ဘူးဆိုရင် တရားမျှတမှုကို လိုလားသူတွေက နိုင်ငံတကာကို ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားမှာ ဖြစ်သလို International Criminal Court (ICC)၊ အခြားသော UN အဖွဲ့အစည်းတွေကို တိုင်ကြားပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံတကာ တရားရုံးတွေ အနေနဲ့ Facebook အသုံးပြုသူရဲ့ IP၊ မေးလ်လိပ်စာတွေကို တောင်းဖို့ ၀န်လေးနေမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူထုမောင်ကာဠုသိဖို့ လိုပါတယ်။
လှုံ့ဆော်မှုတွေရဲ့ အဓိက တရားခံဟာ ဦးဝီရသူလို ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်တွေကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်လည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားနဲ့ လူထုမောင်ကာဠုလို လူတွေ၊ သူတို့ရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုဖော်ထုတ်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖြေရှင်းရပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုမှ မလုပ်ဘူးဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၂၀၁၅ခု နှစ် မတိုင်မီ အချိန်မှာပဲ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေကြောင့် သွေးချောင်းစီးမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ခေတ်သစ်ငရဲခွေးကြီးကို ဖော်ထုတ်ပေးဖို့က လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ လွှတ်တော်ရဲ့ စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ရှေ့မှာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အစစ်ခံခဲ့သလို နိုင်ငံတကာ တရားရုံးရှေ့မှာလည်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အစစ်ခံဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
ရှင်မ ဓါတ်တိုင် ရှိခိုးလော-ရှင်သာ ရခိုင်တန်ဆောင်လော
လွန်ခဲ့ သော နှစ်ပေါင်း-၃၀-ခန့် က ကျွန်တော် ပျော်ရွှင်မြူးတူးခဲ့ သော ရတနာမြိုင်ရွာမှ မိတ်ဆွေဟောင်းများနှင့် စကားပြောဖြစ်သည် ။ ရတနာမြိုင်ရွာဟု ဆိုရာမှာ ယခုမျက်မှောက် အခြေအနေအရ ကိုမှုံ ( ဘကြီးမှုံ ) က ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ် သမုတ်ပေးထားခြင်းကြောင့် ရွာမှ အလူအများက လက်ခံအသိအမှတ် ပြုထားခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည် ။ ရတနာမြိုင်ရွာကား ကျိန္တလီတံထားဦးကို မေးတင်ထားသည့် ရွာဖြစ်သည် ။ ရတာနမြိုင်ရွာသည် သံတွဲမြို့ နှင့် ဂွမြို့ သို့ သွားသည့် လမ်းခလယ်တွင် ရှိသည် ။ သံတွဲမြို့ နှင့် ဂွမြို့ နယ်သည် မိုင်-၈၀-ခန့် ရှိသည် ။ မည်သည့်မြို့ ကပင်လာလာ သွားသွား ရတနာမြိုင်တွင် စခမ်းရပ်ကာ မနက်စာကို စားသောက်ရသည် ။ ထို့ ကြောင့် မစောမြင့် ထမင်းဆိုင်သည် ရောင်းအားကောင်းကောင်းနှင့် ခရီးသည်တို့စားဝင်သောက်ပျော်သော နာမည်ကြီးထမင်းဆိုင် ဖြစ်သည် ။
တနေ့ က ဒေါ်စောမြင့်နှင့် စကားပြောရတော့ သူမက ငါတို့ က ထမင်းဆိုင်ဘဲ ရောင်းနေရသေးတယ်-နင်ကတော့ ပျော်ပေါ့-ဆိုကာ ၀မ်းသာအားရ ရီမူးပျော်ရွှင် စကားပြောသည် ။ သူတို့ နှင့် အတူ အခြားသောရွာသူရွာသားများက စကားပြောချင် မျက်နှာပြချင်နှင့် ပျော်နေရွှင်နေကြသည့် ပုံများမြင်တော့ ကျွန်တော့်မှာ အယင်လွန်ခဲ့ သောနှစ်-၃၀-ခန့် က ဘ၀မျိုးဖြင့် စကားဖေါင်ဖွဲ့ပြောချင်သည့်ဆန္ဒဖြစ်ရသည် ။ သူတို့ တွေ၏ ဓါတ်ပုံတွေကို ပို့ သောအခါ ရိုးသားသော သူတို့ တွေ၏ စိတ်နေသဘောထားများကို မြင်ရသည် ။ မိန်ခလေးတွေက သနပ်ခါး မလူး-ပါးပြင်မှာ လှတပတ မချယ်သလို အဖွားကြီးတွေ ( ကျွန်တော်နှင့် အတူတူ ရွာမှ ရှိနေခဲ့ စဉ်က ( မချစ်မေ တို့ - မအုံးကြည်တို့ အလှပဂေး ကွမ်းတောင်ကိုင်တွေ ) သည်ပင် နဂိုရ်အိမ်မှာ ၀တ်နေကျ အ၀တ်အစားဖြင့် ရိုက်ကူးပြီး ဓါတ်ပုံတွေ ပို့ ကြသည် ။ ယောင်္ကျားတွေ ဆိုလျှင်လည်း ယင်းသို့ ပင်ဖြစ်သည် ။ စင်စစ်အားဖြင့် ရိုးသားဖြူစင်သော သူတို့ ၏ ပုံတွေကိုမြင်တော့ ကျွန်တော်ကြေနပ်ပျော်ရွှင်ခြင်း ဖြစ်ရသည်မှာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော့်ကို သတိရကြောင်း တမ်းတမ်းတတ ပြောရှာကြသည်ကို ကြားရ၍ ၀မ်းသာမျက်ရည်ကျရသည် ။
သူတို့ တွေက ကျွန်တော်နှင့်အတူ စကားပြောနိုင်ဖို့တော်တော်ကြီး ကြိုးစားကြရှာသည် ။ သို့ သော် သူတို့ ပြောသောစကားကို ကြားရသည် ။ ကျွန်တော်ပြောသောစကားကို သူတို့ မကြားတချက် ကြားတချက် ။ ကျွန်တော့်ပုံကို သူတို့ မြင်သည် ။ သူတို့ ရုပ်ကို တခါတလေမြင်သည် ။ တခါတလေ ၀ါးနေသည် ။ တချို့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြောသလို ယခုအစိုးရက အသုံးမကျလို့ယခုလိုဖြစ်နေတာဟု ကျွန်တော် မပြောချင် ။ ကျွန်တော်က နိုင်ငံရေးသမား တဦးဖြစ်သလို နိုင်ငံရေးစနစ် တခုအပေါ် လက်ရှိအုပ်ချုပ်နေသော အစိုးရကို ကောင်းနေသည်ဟု ဆိုလျှင် ကောင်းကောင်း ထောက်ခံမည့်သူဖြစ်သလို မကောင်းလျှင်လည်း မကောင်းကြောင်း ပက်ပက်စက်စက် ဝေဖန်ကန့် ကွက် ရုတ်ချပြောဆိုမည့်သူဖြစ်သည် ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်တော်သည် စနစ်ဆိုးတခုကို သေချာစွာ တော်လှန် ပြောင်းလဲလိုသော နိုင်ငံရေးသမားကောင်းဖြစ်ချင်သည် ။ အဆဲခံလိုသော နိုင်ငံရေးသမား တဦးတော့ ဘယ်လိုမှ အဖြစ်မခံချင် ။
ထို့ ကြောင့် ရတနာမြိုင်မှ ကျွန်တော်၏ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့် ကျန်ရစ်သူများပီပီ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ် စကားပြောကြမည်ဆိုတော့ ရင်ထဲမှာ မချိတင်ကဲ ဖြစ်မိသည်မှာတော့ အမှန်ဖြစ်သည် ။ ကျန်ရစ်သူများနှင့်ဟု သုံးစွဲခြင်းမှာ တချို့ သော သူများက ကွယ်လွန်အနိစ္စ ရောက်သွားကြပြီဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ။ ခုတော့ ကျွန်တော်စကားပြောချင်သော သူများနှင့် လှလှပပ ရင်ပေါ့သွားအောင် စကား မပြောဖြစ်ရ ။ သူတို့ ၏ မျက်နှာတွေကို အားရအောင် ကြည့်ပြီး ပြောချင်သည် ။ သို့ သော် အားရအောင် မကြည့်မမြင်ရ ။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရွှေသဘာဝစီမံကိန်းဖြင့် တနှစ်ကို ဘီလီယံသန်းပေါင်းများစွာဖြင့် ရောင်းချမည်ဆိုသော စီမံကိန်းကို ကျွန်တော်တို့သိနေသည် ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ ၄င်း-ရခိုင်ကမ်းလွန်မှ၎င်း-ရခိုင်ကုန်းတွင်းပိုင်းမြေမှ၎င်း ထွက်ရှိသော ရေပေါ်ရေအောက် မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇါတကား ရခိုင်လူမျိုးတို့ ၏ နှလုံးသွေးများဖြစ်သည် ။ ယင်းနှလုံးသွေးမှ စီးကျသွားသော အင်အားစုများကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အနာဂါတ်အလှအပသည် တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးသော အလှပဆုံးပန်းချီကားချပ် တခုလို ဖြစ်နေပေလိမ့်မည် ။ သို့ သော် ယင်းပန်းချီကားချပ်ထဲ၌ ငိုကြွေးနေသောသူများ ၊ ထမင်းငတ်နေသောသူများ- ဒုက္ခသည်ဖြစ်နေသောသူများ- စာပေမတတ်သောသူများ- မုဆိုးမဖြစ်နေသောသူများ- သင်ချိုင်းတွင် သရဏာဂုဏ် တင်နေကြရသော သူများ- ပါရှိမည်မထင် ။ တချိန်ထဲမှာပင် ယင်းအနာဂါတ်ပန်းချီကားချပ်မှာ ထိန်လင်းနေသော မီးသီးများ-ဝေဖြာထွန်းလင်းနေသော အလှူမီနီယံ မီးသီးမီးခိုင်များ- ဖန်ပြွန်မီးအုပ်ဆောင်းနှင့် တင့်ထယ်ဝေဖြာနေသော ပုံရိပ်များ ပါရှိနေမည်ဖြစ်သည် ။
ရွှေသဘာဝဓါတ်ငွေ့ စီမံကိန်းမှ ရရှိသော ဒေါ်လာငွေများဖြင့် ချမ်းသာကြွယ်နေမည့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် ရွှေသဘာဝဓါတ်၏ မူလပိုင်ရှင် ကာယကံများဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ ၏ ဆင်းရဲဒုက္ခများကို အကောင်းဆုံးဖြေရှင်း ပေးနိုင်ရန် စီမံကိန်းများဖြင့် အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်ပေးသင့်သည် ။ ကျွန်တော်ပြောချင်သည်မှာ ရွှေဂါတ်စ်မှ လျှပ်စစ်မီးကို ၀ယ်ယူအသုံးချသွားမည့် ( တရုပ်-ထိုင်း ) -နိုင်ငံများတွင် ပြည်သူများသည် လျှပ်စစ်မီးကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ခွင့် ရရှိသွားလျှင် ၄င်းနိုင်ငံ၏ ပြည်သူများက ၄င်းအစိုးရကို ပြည့်ဝစွာ အယုံအကြည်ရှိရှိ ထောက်ခံလေးစား သွားမည်ဖြစ်သည် ။ တချိန်တည်းမှာပင် သဘာဝဂါတ်စ်ကို ရောင်းချသော နိုင်ငံမှ ပြည်သူများက သဘာဝဂါတ်စ်ကို မရရှိဘဲ လျှပ်စစ်ကို အကျိုးရှိစွာ မသုံးစွဲလျှင် ၄င်းမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ပြည်သူတို့အယုံအကြည်ပျက်မည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည် ။
ရေနံဆီမီးခွက်မှ မီးကိုကူးပြီး ထမင်းချက်ပြုနေရသော ရခိုင်ရိုးမတောင်တန်းနားက ရခိုင်လူမျိုးတို့ သည် ကမ္ဘာကြီးတခု၏ ပြင်ပစကြ၀ဋ္ဌာကို ရောက်နေသလိုဖြစ်နေသည် ။ လွန်ခဲ့ သောနှစ်ပေါင်း-၃၀-လောက်က ကျိန္တလီမြို့ မှာ လျှပ်စစ်ရုံးရှိသည် ။ မြို့ နယ်လျှပ်စစ်ရုံးမှ မြို့ နယ်မူး ဦးမြကျော်နှင့် ကျွန်တော်သည် ယခုရတနာမြိုင်ရွာကို လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေးအတွက် မည်သို့ မည်ပုံ တောင်းဆိုဆောင်ရွက်ရမည်ဆိုသည်ကို ထာဝစဉ် ပြောဆိုဆွေးနွေးဖြစ်ကြခဲ့ သည် ။ မဆလအစိုးရခေတ်ကပင် ကျွန်တော်သည် ရတနာမြိုင်ရွာတွင် လျှပ်စစ်မီးကို ရရှိစေခဲ့ ချင်သည် ။ ညို့ ညို့ မှိုင်းနေသော ကုက္ကိုလ်ပင်တန်း၏ အလယ်တွင် ၀င်းပထိန်သာနေသော လရောင်အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့သွားလာခဲ့ ရသည် ။ ယင်းတောသဘာဝကို ယနေ့ တိုင် မမေ့ ။ လမိုက်ရက်များဆိုလျှင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ရတနာမြိုင်ကား မှောင်မည်းမည်းနဲ့အတိမှောင်လွန်းမက မှောင်မိုက်နေသော ရွာကလေးဖြစ်သည် ။
ကျိန္တလီမြို့ နယ်ခွဲတွင် လျှပ်စစ်မီးစက်ရှိပြီး နှစ်ပေါင်း-၃၀-လောက် ရှိသည့်တိုင် ရတနာမြိုင်ရွာသို့လျှပ်စစ်မီးတိုင် မရောက်ရှိ -လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသည်မှာ တခုခုလိုအပ်နေပြီဖြစ်သည် ။ ၁၀ -မိုင်သာသာမျှ ဝေးကွာသော ယင်းရွာတို့ သည် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လျှပ်စစ်မီး မရရှိသေးသနည်းဆိုသော မေးခွန်းကို မေးဖြစ်ရပြန်သည် ။ ယခင်က တပါတီစနစ်ဆိုးဖြင့် မဆလအစိုးရလက်ထက်၌ ၄င်းရွာတို့ ၏ အခြေအနေမျိုးကို မည်သို့ မျှ မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသော်လည်း ယခုလို ပွင့်လင်းစပြုနေသော စနစ်သစ်တခုဆီ ဦးတည်ရောက်နေလာပြီ ဆိုလျှင်တော့ လျှပ်စစ်မီးက ရရှိသင့်နေပြီမှာ အမှန်ဖြစ်သည် ။ တနေ့ က ကျွန်တော်နှင့် စကားပြောနေချိန်မှာ သူတို့ နှင့် အဆင်မပြေ၍ ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းမကောင်းကြောင်း ပြောဖြစ်သည် ။ သူတို့ တွေက တာဝါတိုင် ဆောက်လုပ်ဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကိုလည်း တင်ပြထားသည်ဟု ပြောဆိုကြသည် ။ သူတို့ တင်ပြထားသလို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကကော ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရသော ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကပါ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ညီလာခံအထိ ဤကိစ္စကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာပေးရန် တိုက်တွန်းလိုသည် ။
Mobile Phone -များအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်နှစ်ခုဖြစ်သည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်မှုအပိုင်းနှင့် တယ်လီဖုံးလိုင်းများ တည်ဆောက်သည့်အပိုင်းရှိသည် ။ MECTEL -ဖုံးလိုင်းအတွက် လက်ရှိ-ရေဒီိယိုဋ္ဌါနမှာ ( ၂၈၂ ) ခုသာ ရှိနေသေးရာ ဆက်လက်တည်ဆောက်သွားရန်လိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနတ်သုံးစွဲသူ -၆၀၀၀၀၀- ရှိရာ နိုင်ငံလူဦးရေ -၁-ရာခိုင်နုံးမျှ သုံးစွဲနေပြီဖြစ်သည် ။ Simcard- ကို တစ်သန်းရောင်းချပြီးချိန် နိုင်ငံလူဦးရေ သန်း( ၆၀ ) အတွက် လူ-၆၀-မှာ တဦးကျစီ တန်ဖိုးနည်းဖုံးကို သုံးစွဲနေပြီဖြစ်သည်ဟု အစိုးရမှ ထုတ်ပြန်သော သတင်းကိုကိုးကားပြီး ဖေါ်ပြထားသော သတင်းတပုဒ်ကို ဖတ်ရသည် ။
ရတနာမြိုင်မှ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများနှင့် -သူတို့ ၏ သားသမီးများနှင့် ပြောဆိုသောအခါ လိုင်းမကောင်း၍ ရုပ်ကိုေ၀၀ါးသော်လည်း ထိုင်ကြည့်နေရရာ တခုခုတော့ အစိုးရကို တိုက်တွန်းရတော့မည်ဖြစ်သည် ။ သူတို့ ရွာမှလည်း ကျွန်တော့်ကို ပြောပေးစေချင်သည့် ဆန္ဒရှိနေသည် ။ ဖုံးတခါပြောလျှင် -Over sea call - ခေါ်ပါက -တမိနစ် ထောင်ကျော်ကုန်သည်ဟု ပြောသည် ။ သို့ ဖြစ်၍ ကျိန္တလီမြို့ တံထားဦးမှ ရတနာမြိုင်ရွာတ၀န်းသည် အရှေ့ဖက်ရှိ ပုသိမ်-တောင်ငူ-ရေကြည်-အသုတ်-မြေင်းမြ- ရန်ကုန် တို့ နှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် စီးပွါးရေးလုပ်ကိုင်နေသော နယ်မြေဖြစ်ရာ ပင်မအသက်သွေးကြောဖြစ်သည့် စီးပွားရေးဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်စေရန် အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်ပေးသင့်သည် ။ အင်တာနတ်လိုင်းများ ကောင်းမွန်စေရန် တယ်လီဖုံးတိုင်များ -တာဝါတိုင်များကို ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမှ ချက်ချင်းတာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုသည် ။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးမှလည်း ဤရခိုင်ပြည်၏ ဆက်သွယ်ရေးစနစ်ကို တိကျစွာကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များကို အမြန်ဆုံး ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင့် အကြံပြုလိုသည် ။ ရန်ကုန်မြို့ တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးသည် နိုင်ငံရေးတရပ်ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန်တိုင်းမြို့ တော်ဝန် ဦးမြင့်ဆွေက ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသည်မှာ အမှန်အကန်ဖြစ်သည် ။ သို့ အတူ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ ဖွံ့ ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီး ပြည်မနှင့် ဆက်စပ်နေသော ရခိုင်ရိုးမတောင်၏ ငယ်မွေးရွာကလေးများအဖို့ မူ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးသည် နှလုံးသား ကျွန်းခံနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြောစရာသာ ရှိသည် ။ ကျိန္တလီမြို့ နယ် လျှပ်စစ်မှူးသည်လည်း ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသို့ဂွမြို့ နယ် တလျှောက်တွင် ဓါတ်ကြိုးသွယ်တန်းရန် အဆင့်ဆင့် စီမံဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်အလက်များကို တင်ပြရန်သင့်သည် ။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဆိုလျှင် ကျွန်တော်၏ ဆွေမျိုးရင်းချာ မောင်နှမများသည် ခုအချိန်ထိ လျှပ်စစ်မီးတိုင်ကို ကိုင်တွယ်ဖက်ယမ်းပြီး မနေခဲ့ ဖူးကြသေး ။ အကယ်၍ ဂွမြို့ နယ် တလျှောက်လုံး လျှပ်စစ်မီးတိုင်သာ စိုက်ထူပြီး ရှိနေခဲ့ ပြီ ဆိုပါက ကျွန်တော်ပြောချင်သည် ။ ရှင်မ ဓါတ်တိုင် ရှိခိုးလော- ရှင်သာ ရခိုင်တန်ဆောင်လော ဆိ်ုသော စကားကို ကျွန်တော်ပြောဖြစ်နေသည်ဆိုလျှင် လွန်ပါ့မလား ။
အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းများရဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့ သဘောထား သိရှိလို
ဂျီဟဒ်စစ်ပွဲဆင်နွဲမယ်လို့ ပြောနေတဲ့ ပြည်ပက အစွန်းရောက်ဝါဒီများရဲ့ ပြောဆိုချက် ၊ လုပ်ဆောင်ချက်များဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အေးချမ်းစွာနေထိုင်လိုတဲ့ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များရဲ့ ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒီလိုပြောဆိုမှုများဟာ အစ္စလမ်ဘာသာ အပေါ် နားလည်မှုလွဲမှားစေနိုင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ မတူကွဲပြားတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နားလည်မှုတည်ဆောက် ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းစွာ၊ သဟဇာတဖြစ်စွာနေထိုင်နိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ထိခိုက်စေပါတယ်။
အဲဒီလိုပြောဆိုမှုတွေကို သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများက လက်မခံဘူးဆိုတာလည်း သတိပြု စေလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းများရဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ဒီလိုအကြမ်းဖက်တဲ့အယူအဆများအပေါ် သဘောထား ကိုလည်း မေးမြန်းဖော်ပြပေးနိုင်ရင် ပိုသင့်တော်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အခုလို ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ ပုံနှိပ်မီဒီယာများရော၊ အင်တာနက်မီဒီယာ များက ပါ Conflict Sensitive Journalism သဘောတရားလေးကို နှလုံးသွင်းထားသင့်ကြောင်း မေတ္တာ ရပ်ခံတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/05/20133အကြံပြုခြင်း
ရန်ကုန် Lucky Seven လက်ဖက်ရည်ဆိုင်က သတ်မှတ်ချက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/05/2013 1 အကြံပြုခြင်း
Malaysia's peaceful election!
(၁၅)သိန်းဖြင့် ငှားရမ်းထားသော ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းပြန်လည် လက်ခံခြင်းမရှိပါက တရားစွဲဆိုသွားမည်
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် အများစု နေထိုင်သည့် မြို့များ၌ စီမံ...
လူထုမောင်ကာဠု စစ်အောင်၊ ဆိတ်ဖွား စတဲ့သူတွေရဲ့ ရေးဟ...
အစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းများရဲ့ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ...
(၁၅)သိန်းဖြင့် ငှားရမ်းထားသော ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းပြန်...
‘၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မြန်မာဖွဲ့စည်းပုံအေ